Toerana ambony mba hihaona ny vehivavy manan-karena. Hub Pejy
Noho ny krizy ara-bola sy ny tsy fananana asa, kokoa amin’ny Tandrefana ny olona mitady ho an’ny manan-karena ny vehivavy sakaizany sy ny vadiny. Manan-karena ny vehivavy tsy mila be. Tsy maintsy ho mendrika, kanto sy manan-tsaina. Na raha toa ianao ka ho tsara tarehy toy ny Niteraka Pitt, zara raha afaka mihaona ny manan-karena zazavavy eo amin’ny fiainana andavanandro. Manan-karena ny tovovavy tia ny tsara tarehy mirentirenty amin’ny fiara. Jereo ny»fiara salons hatsaran-tarehy». Tanora manan-karena ny tovovavy toy ny nataony ny sasany mamirapiratra ny vato eo ny fiara. Ny vehivavy anti-panahy toy ny fitsidihana BMW, Mercedes salons sy ny fiara mampiseho ny lamaody.
Mandeha fotsiny ny manodidina.
Ny vidiny na inona na inona
Manan-karena ny vehivavy mahafantatra ny fomba mandany vola amin’ny fahafinaretana. Mampiseho ny lamaody dia ny tsy maintsy ho mahomby rehetra sy ny vehivavy manan-karena, izy izay afaka mampiseho ny tena hafahafa akanjo sy lafo vidy tsy manam-paharoa ny firavaka. Io angamba no fotoana tsara indrindra mba hihaona amin’ny tokan-tena manan-karena ny vehivavy. Raha toa ianao tsy manam-bola mba hividy tapakila, manontany ny manodidina, na ny miezaka hahita ny tapakila maimaim-poana amin’ny Aterineto. Indraindray ireo mpikarakara ny hetsika manome azy ireny maimaim-poana na ho an’ny kely vola. Salon hatsaran-tarehy no tsara toerana mba hitsena ny vehivavy mpanankarena. Raha toa ianao tsy manam-bola ny volo manapaka amin’ny iray amin’ireo lafo toerana, miezaka ny hahita part-time job misy toy ny mpitantan-draharaha-barotra na ny mpiasa. Ny fiantrana ny zava-nitranga dia fomba nentim-paharazana toerana tsara indrindra ho an’ny fivoriana ny vehivavy manan-karena. Tsy maintsy mijery miavaka sy mahafatifaty. Milaza fotsiny ny hello sy manolotra ny zava-pisotro. Izany dia ho ampy mba hanombohana ny resaka. Vakansy fahavaratra no fotoana ho an’ny olon-tiany. Indonezia, Thailand, Espaina sy Italia dia toerana izay rehetra manirery manan-karena ny vehivavy handeha. Ianao dia afaka mahita azy ireo na aiza na aiza — ao amin’ny seranam-piaramanidina, eo amoron-dranomasina, ao amin’ny toeram-pivarotana lehibe, trano fisakafoanana. Vao tonga akaiky kokoa ary manomboka ny resaka. Izy ireo dia miandry anao hanao zavatra. Lisitry ny toerana tena asa ny saika isaky ny vehivavy ary indrindra fa manan-karena iray. Dubai, hong kong, Paris, ary Londres no tena toerana.
Ny fomba hanombohana ny resaka
Hanontany ny iray amin’ireo tsara tarehy manan-karena ny ankizivavy mba hanampy anao mifidy ny akanjo ho anao fitiavana ny renibeny, izay efa tena antitra sy tsy mahatsapa tsara) ny tambajotra Sosialy sy ny matchmaking tranonkala toy ny fifandraisana, italiana maimaim-Poana ny Fiarahana sy ny firindrana-club tena mahomby ho an’ny fivoriana iray ny ankizivavy. Internationals dia ho matihanina, monina any ivelany. Ny vehivavy tsy mba manan-karena, fa misy ny sasany mahomby ny vehivavy. Italiana Free Mampiaraka dia feno ny olona manan-karena, nefa tsy izy rehetra tokan-tena. Harmony Club matchmaking tranonkala ho tsara tarehy Aziatika tokan-tena. Noho izany, raha toa ianao ka rehefa manan-karena Aziatika tovovavy, izany no toerana tsara ho anao. Ireo rehetra ireo dia tranonkala maimaim-poana ho mpikambana. VIP hafainganam-pandeha mampiaraka hafa mahatahotra fahafahana mihaona ny manan-karena ny vehivavy tokan-tena. Rehetra izany no ilainao dia ny ho tsara tarehy sy ny asa tsara, raha tsy izany dia mijery fadiranovana ampitahao amin’ny hafa mpanohitra
← Ny Tsara Indrindra-Tampon'ny Toerana Roulette
Maimaim-poana amin'ny chat ao Italia →